प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशी संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत, अव को बन्ला प्रधानन्यायाधीश ? - BP Bichar
Home/breaking/प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशी संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत, अव को बन्ला प्रधानन्यायाधीश ?
काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस दीपकराज जोशी संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट अस्वीकृत भएका छन् । जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्र र उनले यसअघि गरेका कतिपय फैसला विवादित बनेपछि उनी प्रधानन्यायाधीश बन्ने बाटो बन्द भएको हो ।
शुक्रबार बसेको संवैधानिक सुनुवाइ समिति बैठकको २ तिहाइ बहुमतले जोशीलाई अस्वीकृत गरेको हो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदहरूले भने बैठक बहिष्कार गरेका छन् । समितिमा कांग्रेसका ४ सदस्यले वैठक बहिस्कार गरेका हुन । समितिमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका ९ र फोरम तथा राजपाका १÷१ सदस्य रहेका छन् ।
जोशी अस्वीकृत भएपछि अब संवैधानिक परिषद्ले पुनः नयाँ सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिस संसदीय सुनुवाइ समितिमा पुगेर यसैगरी सुनुवाइ हुनेछ । समितिबाट नाम अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
जोशीपछि ओमप्रकाश मिश्र सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश हुन् । त्यसपछि चोलेन्द्र शमशेर जबरा र दीपककुमार कार्कीको नाम रोलक्रममा रहेको छ ।
काँगे्रस सांसदले यस्तो दिए जवाफ
पूर्वसहायकमन्त्री तथा कांग्रेस नेता केशरमान लगायत चार जनामाथि कुटपिट